Farxad Shaki ku Jiro
Dhab ahaantii waa wax lagu farxo in la arko gole baarlamaan oo ay u dhanyihiin intii badneed hogaamiyayaasha kooxaha hubeysan ee Soomaaliya, hase`yeshee farxadani waa mid si shaki ku jiro ummada Soomaaliyeed u soo dhaweysey meel ay joogaanba, sababtuna waxay tahay balan darada looga bartey hogaamiye kooxeedyada. Shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee ugu horeeyey ee lagu qabtey Jabuti 11 juun 1991 ilaa iyo heshiiskii xabad joojinta Edoret 27 October 2002 ragga ku hardama siyaasada Soomaalida marnaba ma dhowrin arimiha ay ku heshiiyeen, sidaa darteed farxadani waa mid shiki la socdo.
Dhaartii shaley (22-08 -2004) ka dhacdey xurunta qaramada midoowey ee Nairobi waa guul hadana dabada ka duleesha, waxaa goobta dhaarinta ka maqnaa xildhibaanadii matali lahaa beelaha Harti, Leelkase, Sade, Sure iyo Xawaadle sida aan ka soo xigtey Gedonet, waxaa kaloo goobta dhaarinta soo xaadirin siyaasiyiin mug weyn ku leh arimaha Soomaalida oo uu ka mid yahay Cabdiqaasim Salaad, Cabdullahi Yuusuf , Cali khaliif, Jaamac Cali Jaamac, Bare Hiiraale, Xuseen Caydiid, Cabdule Qalaad iyo kuwo kaloo fara badan. Maqnaashaha ragani waxaa lagu sheegey mid salka ku haya khilaafka ka jira beelaha dhaxdooda cida matali lahayd iyo qofka soo xuli lahaa xildhibaanada beesha.
Cabdiqaasim Salaad iyo Cabdulaahi Yuusuf waa ragga sida aad ka ah ugu guul dareystey shirkan madaama labadaba sidii ay wax u rabeeyn u noqon weysey. Cabdiqaasim wuxuu jeclaa in ugu yaraan 70% (boqlkiiba todobaatan) ay soo noqdaan xildhibaanadii Carta lagu soo doortey si uu rajo fiican ugu yeesho doorashada madaxweynaha ee soo socota, hase`yeeshe sida aan ka maqley ilo xog ogal ah ragii Carta lagu soo doortey waxaa soo noqdey oo barlamaankan cusub ku jira in ka yar 25% ( boqolkiiba shan iyo labaatan) taas oo ku beertey walaac Cabdiqaasim.
Sidoo kale ma fulin hamigii uu lahaa Cabdulahi Yuusuf oo rajeeynayey in soo xulo ugu badnaan xubnaha Darood ee baarlamaanka galaya gaar ahaan kuwa dega Puntland. Cali Khaliif Galeer, Jaamac Cali Jaamac, Sakariye Maxamuud iyo siyaasiin kale ayaa arinta Cabdulahi watey ka biyo diidey IGAD- na howshii ay watey ku noqdey caqabad adag. Wararka Nairobi ka imaanayna waxay sheegayaan in Cabdiqaasim Salaad iyo Cabdulahi Yuusuf ku hanjabeeyn in shirka ka bixi donaan hadaan la yeelin sida iyaga ay rabaan waa arin fool xun laga naxo lakiin Soomaalidu waxay tiraah Hangaraarac lug ka jabtey u dhukin maayo, Soomaaliweyn iyo Caalamka ayey u taal waxay ka yelaan.
Siyaasada Soomaalida waa wax aan la saadaalin karin wax walbana waxay ku soo biya shuban donaan sug oo eeg walow ay rajo fiican ay jirto taas oo ugu wacan sida ay maanta meel ugu soo wada jeeysteen dowladaha deriska iyo dowladaha arimaha Soomaalida daneeya sidii Soomaaliya dowlad loogu dhisi lahaa. Waxaad moodaa khilaafkii weynaa ee u dhaxeeyey dowladaha Ithiopia iyo Jabuuti in uu soo xalismey ayna ka go`an in Soomaaliya dowlad loo dhiso cidii doontaba ha diide.
Xukuumad iyo gole baarlamaan oo la dhiso keliya ma aha xalka Soomaaliya, wadan mudo 14 sano dowlad la`aan ahaa oo dhinac walbana ka burbursan shacbkiisana 70% (boqolkiiba todobaatan) ay hubeysanyihiin howshiisa ma yara. waxaan rajeeynayaa dowlada dhalan doonta in ay noqoto mid asaas u noqota xalinta mushaakilaadka jira oo iyada ummada ku noqon mushaakil hor leh sidii kuwii hore inoo soo marey.
Xalku ma dhawa howshana fara kama qodna mana aha in aan ka quusano naxriista ilaah, marxalada maanta Soomaalida mareysana waa marxalad dabiici ah oo ummad walba soo martey inkastoo lagu kala duwanaa sida khilaafaadka loo xaliyey . Yurub mudo aad u dheer ayaa ka jirtey colaad iyo dagaalo dhaxdooda ah. Dagaalkii labaad ee dunida waxaa ku dhintey dad ka badan 50 malyan oo ruux oo in ka badan kala bar ay shicib ahaayeen, hadana waa dadkaa heshiiska ah oo leh gole baarlaman oo iyo lacag isku mid ah waxaa lagu gaarey waa iyada oo taariikhda laga faa`iideystey iyo in la fahmey in nabadu qaali tahay oo nabad la`aan nolol aynaan jiri karin. Waxaan rajeeynayaa in Soomaalidu waa cusub u dhasho in danta guud laga hormariyo mida gaarka ah iyo in si wada jir ah nabada loo baadi goobo, lana yareeyo maro ku dhegida iyo damaca xad dhaafka ah. �Hadaan teeda la yeelin ha laysku baaba`o� waa in laga gudbaa.
Ummada Soomaaliyeed waxay maanta ka farxad iyo rajo fiicnaayeen markii la soo dhisey dowladii kumeelgaarka ahayd ee shirkii Carta . Raja xumadii dowladaa laga dhaxley waxay ummada ku reebtey shaki waxaa rajeenayaa in dowlada la soo dhisi doono noqoto mid ka duwan tii Carta lagu soo dhisey iyo in Caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed laga helo isla shaqeeyn iyo taageero fiican, si dowladaa u noqoto mid wax tar leh ummadana u horseeda baraare iyo wanaag.
Faafin: SomaliTalk.com | August 23, 2004